Isihloko Iprojekthi yayiluhambo lokujonga imiba yokubaleka (umxholo wonyaka ka-2019) ngokungakhathaliyo nangokutyibilikayo, kubonisa utshintsho, izinto ezintsha kunye nemiphumo yoko. Yonke imbonakalo icocekile kwaye ikhululekile ukubukela, ngokuthelekiswa nenyani engathandekiyo kwisenzo sokubaleka. Uyilo luhlala lutshintsha kwaye imilo yokuphaphazela kumfanekiso ophathwayo imela isenzo sokufundwa, okubangelwa luhlobo oluthile lwemeko. Ukubaleka kuneentsingiselo ezahlukileyo, ukutolikwa kunye nenqaku lokujonga ngokwahluka ngokudlala ngokuqatha.
Isiseko Somsesane Uyilo lubandakanya ubume besakhelo sesinyithi apho ubumbeko lubanjelwe ngendlela yokuba kugxininiswe kumatye nakwilitye lesinyithi. Ulwakhiwo luvulekile kwaye luqinisekisa ukuba ilitye yinkanyezi yoyilo. Uhlobo olungahambelaniyo lwe-druzy kunye neebhola zensimbi ezibambe isakhiwo ngokudibeneyo zizisa ukuthamba kancinane kuyilo. Inesibindi, i-edgy kwaye iyanxiba.
Intengiso Isiqwenga ngasinye sasenziwe ngobuchule bokwenza imifanekiso eqingqiweyo yezinambuzane eziphefumlelwe ziindawo abahlala kuzo kunye nokutya abakutyayo. Umsebenzi wobugcisa wasetyenziswa njengocingo lokuthatha amanyathelo ngewebhusayithi yeDoom nawo achonga izilwanyana ezithile. Izinto ezisetyenziselwe ezi zikroliweyo zifunyenwe kwiiyadi zejunk, iindawo zokulahla inkunkuma, iibhedi zemilambo kunye neemarike eziphezulu. Nje ukuba zonke izinambuzane ziqokelelwe, zaye zafotwa zaphinda zafakwa kwifoto.
Iayisi Khrimu Le Ukupakisha yenzelwe iNkampani ye-Cream Ice Sista. Iqela loyilo lizamile ukusebenzisa amanenekazi amathathu, abakhumbuza abavelisi bale mveliso, ngohlobo lwemibala eyonwabileyo evela ekuthandeni i-ice cream nganye. Kwividiyo nganye yoyilo, imilo pf i-ice cream isetyenziswa njengeenwele zomlinganiswa, ezibonakalisa umfanekiso onomdla kunye nomtsha wokupakisha i-ice cream. Olu luyilo, luhlobo lwalo olutsha, lutsale umdla omkhulu phakathi kwabakhuphisana nabo kwaye lube nentengiso ephezulu. Uyilo luzama ukwenza iipakeji zentsusa kunye nezoyilo.
Ibhotile Isiseko somqondo wabo yinto yovakalelo. Umqondo ophuhlisiweyo wokubiza amagama kunye noyilo ujolise kwiimvakalelo zomthengi kunye neemvakalelo, banikezela injongo yokumisa umntu ecaleni kweshaliti efunekayo kwaye bamenze ukuba bakhethe kuye ngobuninzi bezinye brand. Iphakheji yabo iveza imiphumo yesicatshulwa esigqibeleleyo, iipateni ezinemibala ziprintwe ngokuthe ngqo kwibhotile emhlophe yobumba obufana nobume beentyatyambo. Ngombono ugxininisa umfanekiso wemveliso yendalo.
Iwayini Uyilo lwe wayini, lilizwe lemvelaphi kwaye isixeko siqwalaselwe kakhulu. Khangela kwimidwebo emincinci kunye nemizobo yendabuko. Imotifs ebalulekileyo yafumanisa ukuba ukufezekisa injongo, oku kuthetha ukuba ngelixa uyilo lwebhotile ye wayini yesiko lwalusebenza kakhulu. Imotif eyayisetyenziswa yoyilo, i-arabesques.Izi motifs ezithathwe kwi-Iranian Varnishedepeyinti. Uyilo luzama ukuyila uyilo lwangaphambili kunye nolwakhiwo kwaye luzabalazela ukuyila uyilo olunentsingiselo, kunye nomyalezo obalulekileyo.
Artificial Topography I-Topografti Thursday 2 December
Conspiracy - Sandal shaped jewels- Izihlangu Ezihotayo Wednesday 1 December
HandiShred Iphepha Shredder Tuesday 30 November
Isihloko Isiseko Somsesane Intengiso Iayisi Khrimu Ibhotile Iwayini